Jorge Valdano oo si xiiso leh kaga hadlay dagaalka loogu jiro hanashada horyaalka La Liga – Gool FM
Jorge Valdano oo si xiiso leh kaga hadlay dagaalka loogu jiro hanashada horyaalka La Liga
Dajiye April 28, 2021
(Madrid) 28 Abriil 2021. Halyeeyga kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Jorge Valdano oo la hadlay Radio Onda Cero ayaa sharaxaad ka bixiyay aragtidiisa ku aadan musharixiinta ugu waa weyn ee ku tartamaya hanashada horyaalka La Liga marxaladda ugu dambeysa ee xilli ciyaareedka.
Kahor 5 kulan ee ka harsan gabagabada horyaalka ee xilli ciyaareedkan, halka Barcelona ay u harsan tahay 6 kulan, ayeey koox kasta ku guuleysan kartaa koobka La Liga, laakiin Jorge Valdano ayaa tilmaamay inaysan jirin koox muujisay calaamado cad oo ka wanaagsan kuwa kale.
Halyeeyga kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Jorge Valdano oo ka hadlayay loolanka Horyaalka La Liga ayaa wuxuu yiri:
“Tartanka wali wuu furan yahay, mana arko in Barcelona ay hubto ku guuleysiga horyaalka La Liga.”
“Waxaa jiri doono kulammo toos ah sida kulanka Real Madrid iyo Seville, Barcelona iyo Atlético Madrid, waxaana laga yaabaa in horyaalka la go’aamiyo.”
Inataas kaddib Jorge Valdano ayaa ka hadlay kooxda Real Madrid wuxuun yiri:
“Real Madrid waxay gaartey dhamaadka xilli ciyaareedka, waxaan aragnay sida ay uga maqnaayeen firfircoonaanta iyo dhiiragelinta kulankii Real Betis, daal badan ayaa jira waana kooxda kaliya ee u tartameysa hanashada horyaalka Spain iyo Champions League.”
Shaxda rasmiga ah kulanka adag Kooxaha Paris Saint-Germain iyo Man City ee Champions League oo la shaaciyey
Man City oo guul soo laabasho ah kaga soo gaartay PSG garoonkeeda Parc des Princes kulanka lugta hore afar dhammaadka Champions League… +SAWIRRO